လုံခြုံသောကုဒ်ဝီကီ - လုံခြုံသောကုဒ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ Linux မှ
လုံခြုံသောကုဒ်ဝီကီ - လုံခြုံသော coding ကောင်းသောအလေ့အကျင့်များရှိသည့်ဝဘ်ဆိုက်
၏တိုးသည် အသိပညာနှင့်ပညာရေး, အ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်အမြဲတမ်းအရေးအပါဆုံးဖြစ်ခဲ့သည် ပိုကောင်းနှင့်ပိုမိုထိရောက်သောလုပ်ရပ်များ, အစီအမံသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များ (ကောင်းသောအလေ့အကျင့်များ) အန္တိမရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန် အကျိုးခံစားရရှိရေးကိုဆောင်ခဲ့ရမည် မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်ကို။
ထိုအခါ ပရိုဂရမ်းမင်း သို့မဟုတ် software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြားမည်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အိုင်တီလှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့ပင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရှိသည် "ကောင်းသောအလေ့အကျင့်" အများအပြားနယ်ပယ်, အထူးသဖြင့်ဆက်စပ်သောသူတို့အားနှင့်ဆက်စပ် ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေး ထုတ်လုပ် software ကိုထုတ်ကုန်၏။ နှင့်ဤ post ကိုကျွန်တော်အချို့တင်ပြပါလိမ့်မယ် «ကောင်းမွန်သောလုံလုံခြုံခြုံကုဒ်အလေ့အကျင့်များ»ခေါ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်မှ "လုံခြုံသောကုဒ်ဝီကီ"အကြောင်းအများကြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးပလက်ဖောင်းများ ပုဂ္ဂလိကနှင့်တံခါးပိတ်အဖြစ်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း။
အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုင်စင်များ - အလေ့အကျင့်ကောင်းများ
အကြောင်းအရာသို့မ ၀ င်မီ၊ ထုံးစံအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်လာမည့်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောယခင်စာပေများနှင့်လင့်ခ်များကိုချန်ထားလိမ့်မည် «ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်ဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအတွက်အလေ့အကျင့်ကောင်းများ».
"... ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်များကပceivedိသန္ဓေယူ။ ဖြန့်ဝေ "ဖွံ့ဖြိုးရေး Initiative များအတွက် Code ကို" အမေရိကန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ်၏အတိုင်းအတာအပေါ် လိုင်စင်ဆော့ဝဲဆော့ဗ်ဝဲထုတ်ကုန်များ (ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာများ) ကိုတီထွင်သောအခါအထူးသဖြင့်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသင့်သည်။" အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုင်စင်များ - အလေ့အကျင့်ကောင်းများ
နည်းပညာအရည်အသွေး - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်များ
အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း Software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကောင်းသောအလေ့အကျင့် - မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
1 Secure Code ဝီကီ - ကောင်းမွန်သောလုံခြုံသောကုဒ်နံပါတ်လေ့ကျင့်ခြင်း
1.1 Secure Code Wiki ဆိုတာဘာလဲ။
1.2.1 ဥပမာ ၁ - .Net (A1- Injection)
1.2.2 ဥပမာ ၂ - Java (A2 - စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းပျက်ခြင်း)
1.2.3 ဥပမာ ၃ - Android အတွက် Java (M3 - မလုံခြုံသောဆက်သွယ်ရေး)
1.2.4 ဥပမာ ၄ - Kotlin (M4 - မလုံခြုံသောစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း)
1.2.5 ဥပမာ ၅: NodeJS (A5 - မကောင်းသော Access Control)
1.2.6 ဥပမာ ၆ - ရည်ရွယ်ချက် C (M6 - ခွင့်ပြုချက်မလုံခြုံမှု)
1.2.7 ဥပမာ ၇ - PHP (A7 - Cross Site Scripting)
1.2.8 ဥပမာ ၈: Python (A8 - မလုံခြုံသောသဲကန္တာရဖြစ်ခြင်း)
1.2.9 ဥပမာအားဖြင့် ၉။ Python (A9 - လူသိများသောအားနည်းချက်များရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း)
1.2.10 ဥပမာ ၁၀ - ဆွစ်ဖ် (M10 - ထူးဆန်းသောလုပ်ဆောင်မှု)
1.2.11 ဥပမာ ၁၁ - WordPress (XML-RPC ပိတ်ထားသည်)
Secure Code ဝီကီ - ကောင်းမွန်သောလုံခြုံသောကုဒ်နံပါတ်လေ့ကျင့်ခြင်း
Secure Code Wiki ဆိုတာဘာလဲ။
"Secure Code ဝီကီသည်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးအတွက်လုံခြုံသော coding လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏နိဂုံးဖြစ်သည်။"
ပြီးတော့မင်းက ကောင်းသောအလေ့အကျင့် နှင့်၏ဝက်ဘ်ဆိုက် "လုံခြုံသောကုဒ်ဝီကီ" ခေါ်အိန္ဒိယအဖွဲ့အစည်းကဖန်တီးနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြသည် Payatu.
ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အချို့ကိုပြသပါလိမ့်မည် လုံခြုံတဲ့ coding ဥပမာများ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်း programming ဘာသာစကားများအချို့သောအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းမှုနှင့်အချို့သည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့်ပိတ်ထားသည်ဆိုသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကကမ်းလှမ်းသည် အကြောင်းအရာ၏အလားအလာနှင့်အရည်အသွေးစူးစမ်း တင်။
ထို့အပြင်၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အရေးကြီးသည် ကောင်းသောအလေ့အကျင့် အပေါ်ပြသ ဖွံ့ဖြိုးရေးပလက်ဖောင်းများ အောက်ပါ:
Android အတွက် Java
၎င်းတို့ကို Desktop ဘာသာစကားများအတွက်အမျိုးအစားခွဲထားသည်။
A1 - ဆေးထိုး (ဆေးထိုး)
A2 - authentication ကျိုးပဲ့နေတယ် (ကွဲလွဲကြောင်းအတည်ပြုခြင်း)
A3 - အထိခိုက်မခံတဲ့အချက်အလက်များ၏ထိတွေ့မှု (ထိလွယ်ရှလွယ်ဒေတာထိတွေ့မှု)
A4 - XML ​​ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ (XML ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ / XXE)
A5 - မှားယွင်းစွာဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်မှု (ကွဲလွယ်သော Access Control)
A6 - လုံခြုံရေးအသွင်ပြောင်းခြင်း (လုံခြုံရေးအမှားပြင်ဆင်ခြင်း)
အေ7 - Cross Site Scripting (Cross-Site Scripting / XSS)
A8 - မလုံခြုံသောသဲကန္တာရဖြစ်ခြင်း (မလုံခြုံသောသဲကန္တာရဖြစ်ခြင်း)
A9 - အားနည်းချက်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း (လူသိများသောအားနည်းချက်များနှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း)
A10 - မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်မှုမလုံလောက်ခြင်း (လုံလောက်သောသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)
M1 - ပလက်ဖောင်းကိုမသင့်တော်သောအသုံးပြုမှု (မသင့်လျော်သောပလက်ဖောင်းအသုံးပြုမှု)
M2 - မလုံခြုံသောဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်း (မလုံခြုံသည့်ဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်း)
M3 - လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေး (မလုံခြုံသောဆက်သွယ်ရေး)
M4 - လုံခြုံမှုမရှိတဲ့စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း (မလုံခြုံသောစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း)
M5 - လုံလောက်မှုမရှိသည့်စာဝှက်ရေးနည်း (မလုံလောက်သောစာလုံးပေါင်း)
M6 - မလုံခြုံသောခွင့်ပြုချက် (မလုံခြုံသောခွင့်ပြုချက်)
M7 - သုံးစွဲသူကုဒ်အရည်အသွေး (လိုင်းနံပါတ်အရည်အသွေး)
M8 - ကုဒ်ခြယ်လှယ်မှု (Code ကိုလက်စားချေခြင်း)
M9 - Reverse Engineering (ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာ)
M10 - ထူးဆန်းသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (ပြင်ပမှလုပ်ဆောင်နိုင်မှု)
ဥပမာ ၁ - .Net (A1- Injection)
အရာဝတ္ထု relational mapper (ORM) သို့မဟုတ်သိုလှောင်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် SQL injection အားနည်းချက်ကိုကျော်လွှားရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဥပမာ ၂ - Java (A2 - စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းပျက်ခြင်း)
ဖြစ်နိုင်ပါကအလိုအလျောက်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ္စည်းပစ္စည်များ၊ brute force နှင့်အခိုးခံရသည့်အထောက်အထားများကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမှကာကွယ်ရန်အချက်များပေါင်းစုံပါဝင်သော authentication ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။
ဥပမာ ၃ - Android အတွက် Java (M3 - မလုံခြုံသောဆက်သွယ်ရေး)
SSL / TLS ကိုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှအထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်၊ session တိုကင်များသို့မဟုတ်အခြားအထိခိုက်မခံသောဒေတာများကို backend API သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုသို့ပို့ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများသို့ SSL / TLS ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဥပမာ ၄ - Kotlin (M4 - မလုံခြုံသောစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း)
ဥပမာ ၅: NodeJS (A5 - မကောင်းသော Access Control)
အသုံးပြုသူသည်မည်သည့်မှတ်တမ်းကိုမဆိုဖန်တီးရန်၊ ဖတ်ရန်၊ မွမ်းမံရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန်ခွင့်ပြုမည့်အစားမော်ဒယ်၏ထိန်းချုပ်မှုထိန်းချုပ်မှုသည်မှတ်တမ်းများပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြenfor္ဌာန်းသင့်သည်။
ဥပမာ ၆ - ရည်ရွယ်ချက် C (M6 - ခွင့်ပြုချက်မလုံခြုံမှု)
Applications များသည်ခန့်မှန်းနိုင်သောနံပါတ်များအဖြစ်ခန့်မှန်း။ ရသောနံပါတ်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
ဥပမာ ၇ - PHP (A7 - Cross Site Scripting)
အထူးအက္ခရာများအားလုံး htmlspecialchars () သို့မဟုတ် htmlentities () [html tags အတွင်း၌ရှိလျှင်] ကိုအသုံးပြုပြီး encode လုပ်ပါ။
ဥပမာ ၈: Python (A8 - မလုံခြုံသောသဲကန္တာရဖြစ်ခြင်း)
pickle နှင့် jsonpickle module တို့သည်မလုံခြုံပါ။ စိတ်မချရသောဒေတာများကို deserialize ပြုလုပ်ရန်ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုပါနှင့်။
ဥပမာအားဖြင့် ၉။ Python (A9 - လူသိများသောအားနည်းချက်များရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း)
ဥပမာ ၁၀ - ဆွစ်ဖ် (M10 - ထူးဆန်းသောလုပ်ဆောင်မှု)
ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင်ထုတ်လွှတ်ရန်မရည်ရွယ်ထားသောလျှို့ဝှက် backdoor လုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ်အခြားအတွင်းပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုများကိုဖယ်ရှားပါ။
ဥပမာ ၁၁ - WordPress (XML-RPC ပိတ်ထားသည်)
XML-RPC သည် WordPress နှင့်အခြားစနစ်များအကြား data transfer လုပ်နိုင်သော WordPress feature တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင်၎င်းကို REST API မှအကြီးအကျယ်အစားထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းနောက်ပြန်လိုက်ဖက်သောအရာများအတွက်တပ်ဆင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်နေဆဲဖြစ်သည်။ WordPress တွင်ဖွင့်ထားလျှင်တိုက်ခိုက်သူသည်အခြားသူများအကြား brute force, pingback (SSRF) တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ခေါ်ဝဘ်ဆိုက်အကြောင်းကို «Secure Code Wiki», အရာနှင့်ဆက်စပ်သောတန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာကမ်းလှမ်း «ကောင်းမွန်သောလုံလုံခြုံခြုံကုဒ်အလေ့အကျင့်များ»; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » လုံခြုံသောကုဒ်ဝီကီ - လုံခြုံသော coding ကောင်းသောအလေ့အကျင့်များရှိသည့်ဝဘ်ဆိုက်
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဆောင်းပါးသည်၎င်းသည် developer တိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
Hacking Tools: GNU / Linux တွင်အသုံးပြုရန်အသုံးဝင်သော Hacking Tools
Chrome 90 သည် tabs များ၊ လုံခြုံရေးများနှင့်အခြားအရာများအတွက်တိုးတက်မှုများပါဝင်သည်